အောက်ဆိုက်ကားပေါ်မှပြုတ်ကျသည့်မိန်းကလေးကို ကားပေါ်ပြန်တင်ပြီး ကျွန်းတောထဲတွင်ပြစ်ချခဲ့သည့် ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တို့ကို အမှုဖွင့်လှစ်ထား - People Media Myanmar
Home အောက်ဆိုက်ကားပေါ်မှပြုတ်ကျသည့်မိန်းကလေးကို ကားပေါ်ပြန်တင်ပြီး ကျွန်းတောထဲတွင်ပြစ်ချခဲ့သည့် ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တို့ကို အမှုဖွင့်လှစ်ထား
အောက်ဆိုက်ကားပေါ်မှပြုတ်ကျသည့်မိန်းကလေးကို ကားပေါ်ပြန်တင်ပြီး ကျွန်းတောထဲတွင်ပြစ်ချခဲ့သည့် ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တို့ကို အမှုဖွင့်လှစ်ထား
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆
အင်းစိန်ပန်းခြံအနီး၌ အောက်ဆိုက်ကားပေါ်မှ ပြုတ်ကျခဲ့သည့် အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ မိန်းကလေးကို ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တို့က ကားပေါ်ပြန်တင်ပြီးနောက် ပြည်တော်သာမှတ်တိုင်အနီးရှိ ကျွန်း တောထဲတွင် ပြစ်ချခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်ကြောင့် တရားခံကို အမှုဖွင့်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းမှ ဒုတိယရဲမှူး တင်လတ်က ပြော သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ ညပိုင်း အင်းစိန်ပန်းခြံအနီးတွင် အောက်ဆိုက်ယာဉ် တစ်စီးပေါ်မှ မ……မှာ ပြုတ်ကျခဲ့သည်။
ထိုသို့ ပြုတ်ကျခဲ့ပြီးနောက် တရားခံမှ ကားပေါ်ပြန်တင်၍ အင်းစိန်မြို့နယ် ပြည်တော်သာမှတ်တိုင်အနီး ကျွန်း တောထဲတွင် မ……. အား ပြစ်ချထားခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အဖြူရောင်မေတ္တာပရဟိတအဖွဲ့မှတွေ့ရှိ၍ အင်းစိန်ဆေးရုံ ကြီးကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကားကတော့ရပြီ တရားခံလည်းသိပြီ မမိသေးဘူး၊ အခုလက်ရှိ ကောင်မလေးအခြေအနေက သတိရတစ်ချက် မရတစ်ချက်ပေါ့၊ အခုမြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံကို လွှဲထားပါတယ်” ဟု အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းမှ ဒုတိယရဲမှူး တင်လတ်က ပြောသည်။
ပြည်တော်သာကျွန်းတောတွင် အပြစ်ခံခဲ့ရသည့် မ…… အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်းစိန်ရဲစခန်းမှ ပုဒ်မ ၃၃၈ ပြင်းထန်နာကျင်စေမှု၊ ပုဒ်မ ၂၀၂ ပြစ်မှုထင်ရှားခြင်းကို သတင်းမပေးမှုစသည်တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
ကျွန်းတောတွင် အပြစ်ခံရသည့် မိန်းကလေးမှာ လက်ရှိ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေပြီး သတိရလိုက် မရလိုက် ဖြစ်နေသေးကြောင်း သူမမှာ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး မိဘအုပ်ထိန်းသူများကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်၌ ယာဉ်ကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သော်လည်း ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
Photo – အဖြူရောင်မေတ္တာပရဟိတအသင်း
#PeopleMedia #မတရားမှု #အောက်ဆိုက်ကား
အောကျဆိုကျကားပျေါမှပွုတျကသြညျ့မိနျးကလေးကို ကားပျေါပွနျတငျပွီး ကြှနျးတောထဲတှငျပွဈခခြဲ့သညျ့ ယာဉျမောငျးနှငျ့ ယာဉျနောကျလိုကျတို့ကို အမှုဖှငျ့လှဈထား
အငျးစိနျပနျးခွံအနီး၌ အောကျဆိုကျကားပျေါမှ ပွုတျကခြဲ့သညျ့ အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျရှိ မိနျးကလေးကို ယာဉျမောငျးနှငျ့ ယာဉျနောကျလိုကျတို့က ကားပျေါပွနျတငျပွီးနောကျ ပွညျတျောသာမှတျတိုငျအနီးရှိ ကြှနျး တောထဲတှငျ ပွဈခခြဲ့သညျ။
ဖွဈစဉျကွောငျ့ တရားခံကို အမှုဖှငျ့ထားပွီဖွဈကွောငျး အငျးစိနျမွို့မရဲစခနျးမှ ဒုတိယရဲမှူး တငျလတျက ပွော သညျ။
ဖွဈစဉျမှာ နိုဝငျဘာလ ၂၃ ရကျနေ့ ညပိုငျး အငျးစိနျပနျးခွံအနီးတှငျ အောကျဆိုကျယာဉျ တဈစီးပျေါမှ မ……မှာ ပွုတျကခြဲ့သညျ။
ထိုသို့ ပွုတျကခြဲ့ပွီးနောကျ တရားခံမှ ကားပျေါပွနျတငျ၍ အငျးစိနျမွို့နယျ ပွညျတျောသာမှတျတိုငျအနီး ကြှနျး တောထဲတှငျ မ……. အား ပွဈခထြားခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ နိုဝငျဘာလ ၂၄ ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ အဖွူရောငျမတ်ေတာပရဟိတအဖှဲ့မှတှရှေိ့၍ အငျးစိနျဆေးရုံ ကွီးကို ပို့ဆောငျပေးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
“ကားကတော့ရပွီ တရားခံလညျးသိပွီ မမိသေးဘူး၊ အခုလကျရှိ ကောငျမလေးအခွအေနကေ သတိရတဈခကျြ မရတဈခကျြပေါ့၊ အခုမွောကျဥက်ကလာဆေးရုံကို လှဲထားပါတယျ” ဟု အငျးစိနျမွို့မရဲစခနျးမှ ဒုတိယရဲမှူး တငျလတျက ပွောသညျ။
ပွညျတျောသာကြှနျးတောတှငျ အပွဈခံခဲ့ရသညျ့ မ…… အမှုနဲ့ပတျသကျပွီး အငျးစိနျရဲစခနျးမှ ပုဒျမ ၃၃၈ ပွငျးထနျနာကငျြစမှေု၊ ပုဒျမ ၂၀၂ ပွဈမှုထငျရှားခွငျးကို သတငျးမပေးမှုစသညျတို့ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားသညျ။
ကြှနျးတောတှငျ အပွဈခံရသညျ့ မိနျးကလေးမှာ လကျရှိ မွောကျဥက်ကလာပဆေးရုံကွီးတှငျ ဆေးကုသမှု ခံယူနပွေီး သတိရလိုကျ မရလိုကျ ဖွဈနသေေးကွောငျး သူမမှာ ကမာရှတျမွို့နယျတှငျ နထေိုငျသူဖွဈပွီး မိဘအုပျထိနျးသူမြားကို ဆကျသှယျအကွောငျးကွားပေးထားကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့ကဆိုသညျ။
လကျရှိအခြိနျ၌ ယာဉျကိုသိမျးဆညျးထားနိုငျသျောလညျး ယာဉျမောငျးနှငျ့ ယာဉျနောကျလိုကျကို ဖမျးဆီးနိုငျခွငျး မရှိသေးပါ။
Photo – အဖွူရောငျမတ်ေတာပရဟိတအသငျး
#PeopleMedia #မတရားမှု #အောကျဆိုကျကား
« မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံအချို့မှ အမေရိကန်ကိုလာရောက်သူများ ဗီဇာငွေတိုက်စာချုပ်အတွက် ဒေါ်လာ ထောင်ချီပေးချေရမည်
အာဏာစွန့်ရန်ပြင်ဆင်ထားဟု ထရမ့်အရိပ်အယောင်ပြ »